ABOn diina ofitti damaqsaa jira – Gubirmans Publishing
Kana sammuuti qabachuun, tattaafattuun Oromo hundi wal cinaa bu’uun sochicha luuxxee galtuu fi duubati harkiftuu irra faloo akka baasan ni abdatama. Haala kana hamaa irra oolchuu kan dandahan warraaqxota kaasicha fuldurati dhiibuuf kutatanii fi kaayyoo kumooti itt wareegamaniif dudhama qaban qofa. Qaama alaa dhufeen faalamuun dhiiga fokkuu qabaachuun uumaa addanjiroodhuunfaa fi ambaati.. Waanti si’ana WBO keessati tahe akka waan kanaan dura hin mullannee fi kophaa ta’eeti ilaalamuu hin qabu. Qaama sadoo ballaa walxaxaa kan yeroo dheeraaf harkifataa jiruu tahuun ni mala. Dammaqanii eeguu kanneen qooda fudhatan hunda barbaada.